ဥယျာဉ်ထဲကငှက်ကလေးများ — Steemkr
ငါမျှမျှတတကြီးမားသောဥယျာဉ်ကိုဝိုင်းရံနေတဲ့ဘန်ဂလိုတွင်နေထိုင်ကြသည်။ များစွာသောအပင်များနှင့်မြက်တွေအများကြီးနှင့်အတူဒီနေရာမှာကြီးထွားလာသစ်သီးပင်တစ်အရေအတွက်ကိုရှိပါတယ်။ ပထမတစ်ချက်မှာထိုဥယျာဉ်ကိုအလွန်တိတ်ဆိတ်ပုံပေါ်ပေမယ့်တကယ်တော့အများအပြားငှက်နှင့်တိရိစ္ဆာန်များအထဲတွင်အသကျရှငျသို့မဟုတ်မကြာခဏပြုလုပ်သွားရောက်ကြည့်ရှု။
မနက်တိုင်းငါ magpie-ရော်ဘင်၏ shrill သီချင်းများအားဖြင့်နိုးနေပါတယ်။ အဆိုပါသံကိုဒါချိုမြိန်သည်နှင့်ငှက်ပျောက်ပျံသည်အထိကိုယ့်သီချင်းတွေနားထောင်ပြီးအိပ်ရာမှာအိပ်။
တနေ့လုံးတဆင့်ကျနော်အမျိုးမျိုးသောငှက်တို့သည်သစ်ပင်များနှင့်အပင်ပေါ် လာ. ထိုပုံမှန်အတိုင်းကြည့်ပါ။ အချို့ကနည်းနည်းနာသီချင်းဆိုသို့မဟုတ်ငြိမ်ဝပ်စွာနေထံသို့လာကြ၏။ အခြားသူများကအစားအစာကိုရှာဖွေထံသို့လာကြ၏။ ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲသူတို့ကိုမြင်ဖို့အပျော်အပါးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်တိတ်တဆိတ်ထိုင်သူတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုဘေးလွတ်သောသွားပါ။ ငါ oriole, ပြောက်-ချိုးငှက်, ခို, အဝါရောင် နဲ့ကျွန်မနာမည်မပေးနိုငျသောအမျိုးမျိုးသောသည်အခြားနည်းနည်းငှက်တို့သည်မြင်ကြပြီ။ သူတို့က, ကခုန်သီခငျြးဆိုနှင့်သူတို့၏လှပသောအရောင်များကိုဖော်ပြရန်။ ဒါဟာအတော်လေးအားရစရာဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်အစားအသောက်ခိုးယူဖို့အိမျသို့လာသောသူတို့ကို peskylittle စာငှက်ရှိပါတယ်။
တစ်ခုမှာနံနက်ပဲလာမယ့်တစ်ဦးသရက်သီးသစ်ပင်မှသူ့ဟာသူ sunning အဖြူရောင်-ရင်သားကင်ဆာရေကြက်မကိုမြင်တော်မူ၏။ ဤသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ရှက်သည်ငှက်ကယ့်ကိုငါ့ဥယျာဉ်၌ခိုလှုံဖို့ pinchof တိုးတက်မှုကိုခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ ပြောဝမ်းနည်းဖွယ်, ပတျဝနျးကငျြဧရိယာတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလျက်ရှိသည်နှင့်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကွယ်ပျောက်ပျက်စီးလျက်ရှိသည်။
တချို့လူတွေကသူတို့ရဲ့သီချင်းတွေကိုနားထောငျဖို့လှောင်အိမ်ထဲမှာငှက်တို့သည်စောင့်ရှောက်လော့။ ငါငှက်လွတ်လပ်စွာနေထိုင်ဘို့ဝေး သာ. ကောင်း၏ဟုဆိုသည်။ ထိုအခါသူတို့ကသဘာဝကျကျသူတို့ရဲ့သီချင်းတွေကို, သီခငျြးဆို, ဒါမှမဟုတ်မနာသီချင်းဆိုဘူး။ ဒါဟာသူတို့ကိုပင်တို့တွင်လွတ်လပ်စွာပျံသန်းကြည့်ရှုရန်အံ့သြစရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမဆိုဦးတည်ချက်အတွက်ခြေမထက်ပိုမရွှေ့နိုင်ခြင်း caged ငှက်တို့သည်ကြည့်ဖို့ဒါအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
esteem birds garden nature life